I Maurice de Hond dia mahita ny valiny tsy misy dikany (horonantsary) misy iray metatra sy sasany: Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 22 May 2020	• 13 Comments
Ao anatin'ny 33 minitra manaraka, jereo ny Maurice de Hond, ilay lehilahy ao ambadiky ny fitsapan-kevi-pirenena lehibe izay ahafahantsika “mahatoky tanteraka”. Hitan'i De Hond fa ny fandinihana sasany dia mampiseho fa ny fikajiana iray sy sasany metatra dia tsy misy dikany ary ny coronavirus dia mihanaka indrindra rehefa mahantra ny fitrandrahana.
I Maurice dia azo antoka fa resy lahatra momba ny fisian'ny virus ary amin'ny alàlan'ny tranokalany smartexit.nu mahita antso izahay hameno ny antsipirihanao momba ny aretina nahazo anao na tsia ny soritr'aretinao. Raha ny marina, izany dia efa fomba marani-tsaina manoloana ireo fampiharana izay tsy ho ela dia hanara-maso anay.
Eny, eto amin'ny tranokala isika matetika dia miresaka momba ny fanoherana voafehy sy ny fahafantarana ny isa 33 ampiasain'i Freemasonry hanondroana fa mifehy azy ireo izy ireo. Tsy matoky an'i Maurice de Hond aho, miaraka amin'ireo biraom-pirenena sy ny horonan-tsary mandritra ny 33 minitra, mandritra ny iray metatra.
Ny fantatsika dia hoe tahaky ny lalana mankany Roma, dia tsara foana ny handamina ny fanakianana ny fanjakana. Raha manosika ny olona hameno ny angona ara-pahasalamany ianao mandritra io tsikera io dia efa ananan'ireo olona ireo ao amin'ny tranonkalanao ianao. Tsy ho ela dia alaina ny fampiharana ary ny Maurice dia afaka manara-maso tsara ny "fiparitahan'ny coronavirus".
Na eo aza ny fanakianana azy, ny Maurice de Hond dia manentana anao handray anjara amin'ny fanaraha-maso sy manomana anao amin'ireo fampiharana data lehibe
Ny tsirairay dia afaka mahatsapa ny fehezin'izy ireo fa mandalo ny fiaraha-monina iray sy sasany ary sasany ary voafitaka isika. Mihevitra ny rehetra fa misy ambadik'izany metatra sy sasany izany. In ity lahatsoratra ity Hamafisiko (miaraka amin'ny porofo fa ilaina ny iray sy sasany metatra mba ahafahana mamaky mivantana sy manoratra ny fiasan'ny ADN / RNA anao). Tsy maintsy mihazona elanelana ampy tsara ny tsirairay avy amin'izany. Ilaina izany elanelan-tany izany ary ilaina amin'ny «Internet ny zavatra» izay hanamboarana ny zavatra iray ny olombelona.
Tokony hifindra avy any Krimson Maurice de Hond isika avy amin'ny "hidy manan-tsaina" mankany amin'ny “fivoahana hendry”. Mahafinaritra daholo izany ary tena tsy misy azo lazaina, saingy tsy matoky an'i De Hond amin'ny antontan'isa aho ary tsy matoky ny antontan'asan'ny fanjakana akory aho. Pahafoana ve izany? Eny, antsoy izany mampiahiahy mahasalama izany.
Raha ny hevitro manokana dia tsy tokony hidona amin'ny lalana fivoahana isika, fa amin'ny fanasaziana mahatsiravin'ny governemanta lainga izay tsy maintsy midina avy hatrany ary hosoloin'ny solontenan'ireo olona nomen'ny vahoaka. Ireo minisitra nofidina tamin'ny alàlan'ny demokrasia mivantana izay mianiana amin'ny tsy fanekena ny vahoaka fa tsy satro-boninahitra.
Mila mijanona ny fitarainana amina governemanta isika satria manome izany ara-dalàna izany. Maurice de Hond dia maneho fanajana sy fankasitrahana an'i Mark Rutte ary efa nandritra ny taona maro dia natokana ho lehilahy izay navela hivarotra ny demokrasia politika demokrasia diso amin'ny alàlan'ny "polls". Ny fomba tokana hivoahana amin'ity toe-javatra ity dia ny fiatrehana ireo kabinetra fanaovana lisitra lisitra ity ary tsy hanome azy trosa intsony. Tsy fivoahana tampoka akory, fa revolisiona!
Aza voataona ao anaty harato manaraka; iray izay mitazona ny fanantenana ratsy indrindra amin'ny fanovana, raha ianao kosa mandroso mankany amin'ny eritreritra 'fandrefesana dia fahalalana'. Misafidiana revolisiona henjana sy mazava izay ilaina, ohatra, mba hisorohana ny lalàna fanaovana vaksiny tsy maintsy atao ary ny famongorana ny iray sy sasany metatra tsy misy dikany. Mandeha www.fvvd.nl
UPDATE 26-05-2020: toa ny sary nalaina tao amin'ny YouTube tamin'ny alàlan'ny YouTube ny horonan-tsarin'i Café Weltschmertz sy ny tafatafa tamin'i Maurice de Hond.
Loharano fidirana anaty vovoka: wikipedia.org, smartexit.nu, fvvd.nl
Ny biraom-panjakana 900 olona ary niantso azy io ho solontenany hanosika ireo fampiharana corona (Fanavaozana)
Ny fialan-tsasatra amin'ny corona no ratsy indrindra amin'ny oronao: ny fahizay fa akaiky ny fahalalahana
Tags: iray sy tapany, kafe, Coronavirus, de, Fivoahana, Featured, Hond, nahira-tsaina, lockdown, Maurice, mametraka, fikarohana, fiaraha-monina, manan-tsaina, Video, weltrschmertz
22 May 2020 amin'ny 11: 46
Eny eo ianao manana iray hafa, iray avy amin'ny klioba ary resaka lahateny malefaka foana. Rehefa maheno azy ireo miteny, dia toy ny hoe eo an-tanany ny 'fahendrena rehetra'. Azon'izy ireo jerena ny fahanginan'ny haino aman-jery mandritra ny taona vitsivitsy na hiala fotsiny izy ireo ary ento miaraka aminao ny 'Corona'. Hahatsiravina ary mangingina fotsiny.
Sainan'ny olona ny fangatahana izao! https://www.fvvd.nl
22 May 2020 amin'ny 12: 08
Mety ho izany, saingy afaka nisoroka ny fahafatesan'ny olona 33 izahay raha nandray ny fepetra. 😷
ps: Any amerika ny fanatanjahantena dia antsoina hoe C rimson C ontagion  mety ho lohateny Suske en Wiske fotsiny izany.
22 May 2020 amin'ny 12: 26
Eny, eny, manomboka mametaka ny zava-drehetra ianao amin'ny famerana ny fahalalahana maneho hevitra. Sangisangy izany.
Eny, tsy mahagaga raha rehefa maty ireo zokiolona manana fitarainana ara-batana mavesatra ary matetika ny tsy fahampian-tsakafo, sakafo efa vonona, maty ao amin'ireny trano mpampinono ireny. Miara-mitoetra ary mifanakaiky ny zokiolona ary mifoha amin'ny gripa. Tsy nahomby ny governemanta, tsy tokony tazonina niara-nisaina ny zokiolona. Izy io dia azo sakanana ary mety sazy raha ny saiko. Mbola misy manamboninahitra sy mpanenjika henjana izay hisambotra ny lehibeny sy / na ny fitantanana ireo trano fisotroan-dronono / RIVM sns. Tsia mazava ho azy. Soa ihany fa miaina ao amin'ny firenena 'maimaimpoana' fanjakana 'lalàmpanorenana izahay.
22 May 2020 amin'ny 14: 31
mora ny miresaka an'i Sunny raha toa ka manao fandanjalanjana fotsiny ny andraikitra rehetra amin'ny AOW sy ny fisotroan-dronono ianao dia hipoitra ny tsy fahampiana ary tsy afaka manome antoka ny fandaniana ho an'ny ho avy isika. Mazava ho azy fa efa jerena mialoha ny governemanta ary amin'ny alàlan'ny fanitarana, ny toby Covid konsily dia fepetra takina tsotra nefa tsy mampitombo ny halavoana.
Eto hafa 👃
23 May 2020 amin'ny 11: 06
Nisy vahaolana iray koa hita ho an'ireo olan'ny fisotroan-dronono:
“Ny rafitra vaovao ankehitriny eo amin'ny latabatra dia tokony hamaranana ny fifanakalozan-kevitra momba ny toe-javatra ratsy amin'ny vola fisotroan-dronono, vokatr'izany dia tsy nahafahan'izy ireo nahavita ny fangatahan'ireo mpikambana ao aminy taloha. Tsy ilaina intsony ny fifampidinihana tsy tapaka amin'ny 'vidin'ny zanabola' na hampihena ny fisotroan-dronono na tsia. ”
Amin'ny teny hafa: tsy misy antoka intsony amin'ny fisotroan-drononoo ary na dia ny volam-bola aza no misarika azy ireo, tsy voatery hampamoaka azy ireo izy ireo. Rehefa dinihina tokoa, dia noho ny fihenam-bidy teo amin'ny fifanakalozana fifanakalozana.
22 May 2020 amin'ny 12: 10
22 May 2020 amin'ny 12: 18
Kat, Vogel, tsy mety sasatra ianao fa maka azy ireo raha tsy izany avy amin'ireo loha khazars ireo. Manaova orona ho azy….
22 May 2020 amin'ny 20: 12
Midika izany ianao, ny orona an'ny (Gerrit) Zalm izay nanoro anao ny fomba handrarana banky ary apetraho amin'ny olona ny volavolan-dalàna.
23 May 2020 amin'ny 00: 15
Marina izany, fa tsy maintsy miaiky aho fa milalao tsara ry zareo amin'ny lalao Hegelian. Miverimberina matetika ny mponin'i Madurodam antonony dia nilalao, nibontsina ary nirotsaka tany anaty zozoro niaraka tamin'ny felaka, sa nisy fandrika faninganana ve?
Tsy mahafinaritra teatra izany ary maimaimpoana… oh, ny kaonty (petra) no tsy manaraka
23 May 2020 amin'ny 11: 38
Tsy manome fitenenana azy ireo aho. Tsy manao an'izany koa izy ireo
olona tsy tafiditra ao amin'ny kliobany izay mety / lasa mpifaninana aminy ... Ah, efa nilaza ny fisian'ny areti-mifindra vaovao izy ireo, angamba ny fandaharana dia teny tsara kokoa. Ahoana no fomba clairvoyant sy manokana. Avereno any amin'ny fiatoana sy misavoritaka ireo andevo, Ny teny filatsahany. Rehefa tena handeha tokoa izy ireo. Tsara kokoa noho ny anio.
Saino ny sonia izao fangatahana izao! Tsy maninona na amin'inona na amin'inona.
24 May 2020 amin'ny 10: 39
Izay tsy hitantsika
Total Horror atsy Afrika
An'arivony ireo tratry ny tratry ny tazomoka maty tamin'ny taona vitsivitsy.
Fa izao amin'ireo tranga corona vitsivitsy dia efa natsangana ny toby voafonja ... jereo eto ambany
Misintona olona teny an-dalambe izy ireo ary nariana amin'ny toby 🙁
Sephus nanoratra hoe:
24 May 2020 amin'ny 15: 15
Ity sary ity eto ambany dia maharitra 13 minitra. Kisendrasendra? Heveriko fa vita tsara tarehy izy io
Na raha misy milaza ao amin'ny fanehoan-kevitra: Misy fahamarinana bebe kokoa eto ao anatin'ny 13 minitra noho ny fidiranao amin'ny fanabeazana an'ny 12 taona
24 May 2020 amin'ny 15: 35
Ny alika sy ny antontan'isa azony avy amin'ny satrony tamin'ny nahaterahany. Tsy fikarohana, fa izay noeritreretiny hoe ahoana sy ahoana.
« Firifiry ny Holandey no mbola afaka mandoa ny volany mandritry ny krizy corona?
iPhone dia manafina ny fampiharana covid-19 farany amin'ny fanavaozana i-OS 13.5 farany »
Total fitsidihana: 2.554.172
Martin Vrijland op Olona an'arivony tao amin'ny kianja Dam Square no nandoa fihetsiketsehana na natokana ho an'i George Floyd izay tsy misy mahafantatra?
Camera 2 op Olona an'arivony tao amin'ny kianja Dam Square no nandoa fihetsiketsehana na natokana ho an'i George Floyd izay tsy misy mahafantatra?
Sanne op Fomba famonoana ataon'ny polisy Minneapolis George Floyd hamahana ny ady an-trano?